Canada oo dawada Ebola ku deeqaysa - BBC Somali
Canada oo dawada Ebola ku deeqaysa
Image caption shaqaale caafimaad oo buufinaya fayraska Ebolaha
Dawladda Canada waxa ay sheegtay in ay ku deeqayso dawo tijaabo ah oo cudurka Ebolaha ah taas oo lagu dawayn karo kun qof, si ay gacan uga gaysato la dagaalanka lagula jiro cudurkaasi oo Galbeedka Afrika ka dilaacay.
Arintaasi waxa ay timid ka dib mar kii Hay'adda Caafimaadka Adduunku ay sheegtay in ay anshaxa waafaqsantahay in dawooyin aan horay banii'aadam loogu tijaabinin in loo adegsado bukaanada qaba cudurka Ebolaha.
Si kastaba ha ahaatee, khuburada waxa ay sheegeen in dawada Zmapp ay xadidantahay ayna wakhti qaadanayso in dawooyin kale oo noocaas ah la soo saaro.
In kabadan hal kun oo qof ayaa u dhintay tan iyo intii uu cudurkani dilaacay.
Canada waxa ay sheegtay in ay Hay'adda cafimaadka Adduunka ay ugu deeqayso dawadaasi oo siddeed boqol ilaa kun qof lagu dawayn karo, si ay ugu isticmaasho Galbeedka Afrika, dawooyinkaas waxaa lagu tijaabiyay xayawaanka oo kali ah.
Si kastaba ha ahaatee waxa ay sheegeen in ay la hari doonaan qayb yar oo ka mid ah dawada si ay cilmi baaris ugu sameeyaan amaba u isticmaalaan hadii Canada gudaheeda looga baahdo.